यदि ओली अप्ठेरोमा परे भने माधवलाई एकदिन पछुताउने बनाइदिन्छु ! – News543Online
यदि ओली अप्ठेरोमा परे भने माधवलाई एकदिन पछुताउने बनाइदिन्छु !
May 11, 2021 adminLeaveaComment on यदि ओली अप्ठेरोमा परे भने माधवलाई एकदिन पछुताउने बनाइदिन्छु !
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि पार्टी फुटाउन लागेको अरोप लगाउँदै पछुताउने समय आउने उनको भनाइ छ। ‘देउवा र पुष्पकमलका लागि पार्टी चो’इट्याउन कृ’तशंकल्पित हुनेलाई पछुताउने समय आइहाल्छ नि ,’ उनले लेखेका छन् ।
एमाले नेता पशुपति चौलागाईंको निधन rip rip 😫😫
मोडेल अञ्जली अधिकारीलाई के भयो ? लिएर आइन् यस्तो भिडियो get well son